प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो- अरुन्धती राय
प्रकासित मिति : २०७४ फाल्गुन ३, बिहीबार ०१:१२ प्रकासित समय : ०१:१२
मेरो विचारमा दुई किसिमका मानिसहरू हुन्छन् । पहिलो, जसको शक्तिशाली मानिसहरूसँग नेचुरल एन्लाइटमेन्ट प्राकृतिक अन्तरघुलन हुन्छ र दोस्रो प्रकारका मानिसहरू ती जोसँग केही पनि छैन । जनतासँग शक्ति त अथाहा छ । तर मुलुकमा जे हुँदैछ, त्यसलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको सही विधि बुझ्न सकिएको छैन । यदि कोही प्रधानमन्त्री नै बन्यो भने पनि त्यसले यी सबै कुरा सुधार्न सक्दैन । मलाई माथिबाट कुनै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्दैन, सुधार तल्लो तहदेखि मात्र सम्भव छ ।
सरकारका नीतिहरू समाधानको सट्टा जनताको हितविपरीत कसरी जाँदै छ र ?
एकातिर अमेरिकी नीति मानवताको खिलाफमा देखिन्छ तर अर्कातिर प्रत्येक मानिस अमेरिका जाने अवसर गुमाउन चाँहदैन, यस्तो किन र ?
मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो । किनकि यसले आफूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त राखेको छ । ‘कन्टेम्ट अफ कोर्ट’ अदालतको मानहानीले सबैलाई तर्साइदिएको छ । तपाईं यसका खिलाफ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । प्रेसले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले आदेशहरू हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अदालतले कति गैरजिम्मेवार ढङ्गले निर्णय गर्छ । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका यति शक्तिशाली हुनु ठीक होइन ।
काठमाडौं, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई मातृशोक परेको छ । उनकी ममतामयी आमा चित्रकुमारी रेग्मीको
मेडिकल शिक्षामा चर्को शुल्क असुली अझै उस्तै
काठमाडौं, चिकित्सा शिक्षाका विकृति रोक्न ६ महिनाअघि छुट्टै ऐन जारी गरिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी
२०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०८:३७
२०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०८:२४
दशैं अघि नै नारायणीमा पानीजहाज सरर….
२०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०७:५९
नाफा कमाउन नसकेको भन्दै जहाज बेच्न निर्देशन
२०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०७:५०
फेस अफ नेपालगन्ज सिजन २ को उपाधी प्रजवल र रितिको पोल्टामा
२०७६ भाद्र ३०, सोमबार १७:५६